Translation ka-Manzi, Faith (2008) Ukuphuma Ebhodweni Ungene Emlilweni ( Out of the frying pan into the fire). : -.
Abasebenzi kufanele bazethembe bona!
Abasebenzi baseNingizinu Afrika akufanele badukuswe iCongress of the People, lenhlangano entsha eholwa ngu “Terror” Lekota, eqhamuka ekuhlukaniseni kwabo neANC eholwa nguJacob Zuma, iletha isisambululo ezinkingeni zabo.
Uma sibheka emuva ngenkathi iANC isavaliwe futhi uLekota engumholi weUnited Democratic Front, akazange azikhathaze ngezinkinga ngabasebenzi. Ubehlale emelene namasocialist futhi ehamba phambili ekubukeleni phansi izindlela zokubusa ngeningi zeCOSATU.
ULekota wayehlala eshumayela izindlela ezimbili zokubusa ngokwezambane likapondo eNingizimu Afrika bese kuthi esikhathini esizayo bese kubusa isocialism.Yingakho kusuka phansi kusaqalwa phansi kukhankaswa wayengamhloniphi umuntu olwela isocialism.
Lokukuhlukana akuncikile ekungabonini ngeso elilodwa ngemigomo, ukuwa-nje kwamasela!Uhulumeni wehulumeni weANC neSACP uqale-nje ngokubusa ngecapitalist market futhi isocialism ivele yanyamalala. Emva kokungena endlelni yokuqala abaphindanga bakhuluma ngendlela yesibili.
Into engadida abasebenzi indlela abakhankaswa ngayo yizona zombili lezizinhlangano. Okokuqala Icosatu neSACP iveza uZuma njengomuntu omele abantu ohlangothini lweANC. Manje u “Terror” usitshela ukuthi ukuqembuka kwakhe kusohlangothini lwangasesinxele futhi uthembise ukuya ezimpandeni zeANC endala nokubuya bavakashele i “Freedom Charter”
Kodwa ukuxhasa noma iluphi uhlangothi kuyobe kufana “nokugxuma usuka ebhodweni ungena emlilweni”!, Ngoba, okungaziwa ngabantu, izidingo ezincane-nje ze “Freedom Charter” zafakwa emqonyeni ngisho kukngakakhulunywa ngomkokotela we “Ningizimu Afrika Entsha” kwenzeke eKempton Park; abaholi abasidayisa bagoba kakhulu bezama ukukhombisa umbuso kaDe Klerk kanye nomhlaba wonke ukuthi bona ngeke baphazamise umnotho womhlaba ombuso ngabezambane likapondo.
Ngeke bezilungiselela ngalokhu kusidayisa basebezigqibile izinkulumo ezibalulekile mayelana nezinhlangano zabasebenzi mayelana ne “Workers’ Charter”. Lomthetho yayilethwe yisinqumo senkomfa yango1987 lapho izinhlangano ezihlangene zabasebenzi kwiNational Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA). Yayibhale ukuthi “Ukungabikhona kwezinye izindlela kanye nokudideka okukhona emphakathini mayelana nezindaba zombusazwe ngenxa yokungabikhona kohlelo labasebenzi” futhi yase imemezela ukuthi abasebenzi baxhumane nabangane babo, ikakhulukazi abasha abahlangene, ukuze yakhe uhlelo “oluzokwakha isociety yamasocialist lapho abasebenzi beyolawula uhulumeni kanye nezimboni kube yikho okubusa eNingizimu Afrika ekhululekileyo.”
Lokhu kwakhuphikisana nalokhu abaholi ababefuna ukuvala amehlo futhi bathulise abasebenzi kanye nemiphakathi enhlwempu abahlupheka kakhulu futhi balwa kanzima bemelene nobandlululo. Ngakho-ke I “Workers Charter” ekufanele ivakashelwe manje! Ibalance Sheet yeminyaka eyishumi nesine ebusa uhulumeni weANC neSACP kukhombisa ukwenziwa ngasese kwezakhiwo namaphesenti angamashumi amabili nantathu abantu abangasebenzi ( amaphesenti anagamashumi amane okubalwa kuwo angenawo umdlandla wokufuna umsebenzi). Kunekinga enkulu kwezempilo, ikakhulu kazi ukuqhubeka kokudlondlobala kwegciwane lesandulela ngculazi kanye nayo ingculazi; izindlu ezifaneleyo, imfundo kanye nezinye izidingo zomphakathi abantu ababalelwe ezigidini abangazitholi kanye namanani okudla, amandla kagesi kanye namanzi konke kubiza kakhulu.
Kodwa-ke, njengoba imibutho emukhulu yasuma ukumelana nobandlululo, ngakho-ke lesisimo sempilo siletha ukumelana nezenzo zikahulumeni ezweni lonke. Kusukela ngo2007 lapho bengaphezulu kwabantu abayizigidi ezingamashumi amabili nanye zezinsuku ezilahleke kutelekwa, ikakhulukazi le eyadonsa inyanga yonke ngabasebenzi abasebenza kuhulumeni. Futhi izinkulungwane zigwele imigwaqo zimelene nendlela izidingo elethwa ngayo, okubalelwa ezitelekeni eziyinkulungwane ngonyaka.
Ngakho-ke ukumelana nemithetho engasizi abantu kulohulumeni obusayo kukhona ngamandla, zonke lezizimo ezingabhekeleli umphakathi yizona ezenza kube khona lomfutho wokumelana nohulumeni! Akukho-nje kuphela kulabo “abahlubuke” kwiANC. Kukhona yonke indawo eNingizimu Afrika ezindaweni zomphakathi, ezimbonini, ezimayini, emitateni kanye nasemalokishini. Kukhona futhi ezinhlanganweni zamasocialist ezizimisele kakhulu ngezingxoxo zokuletha phambili inhlangano entsha yabasebenzi. Lokhu kungaphumelela uma imigomo yayo incike kwi “Workers’Charter” ezoba nezidingo ezihambelana nesocialism kanye nokuqonda ukuthi abasebenzi kufanele bazithembe bona!